काफल पाक्यो तर भोटे फर्केनन् ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार मुस्ताङ समाचार काफल पाक्यो तर भोटे फर्केनन् !
२०७७, ७ बैशाख आईतवार १५:१२
निरज थकाली / हिमालबाट जाडो छल्न पोखरा झरेकी छिरिङ गुरुङ गर्मी बढ्दै जाँदा दुःखी बन्नुभएको छ । गत मङ्सिरमा (पोखरा) झर्नुभएकी उहाँ गाउँ फर्कन नपाएर हैरान हुनुभएको हो । गाउँ फर्कने तयारीमा रहेका बेला सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेकाले पोखरामै अलपत्र पर्नुभएको हो।
हिमाली भेकका बासिन्दालाई गर्मी ठाउँ फाप्दैन । “पोखरामा गर्मीले बस्नै गाह्रो भयो । खाना पनि रुच्दैन”, ६८ वर्षीया गुरुङले टेलिफोनमा भन्नुभयो, “गाउँ सम्झँदै धुरुधुरु रोइरहन्छु ।” उहाँको गाउँ लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको ढेगाउँमा छ ।
यस्तो व्यथा छिरिङ एक्लैको मात्र होइन, पोखरासहित अन्य ठाउँमा जाडो छल्न झरेका मुस्ताङीको सङ्ख्या ५५० भन्दा बढी भएको अनुमान छ । “गाउँ जान नपाएर मुस्ताङी अलपत्र परेका छन्”, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं उपल्लो मुस्ताङ लो–मन्थाङका बासिन्दा इन्द्रधारा विष्ट भन्नुहुन्छ, “हामीले सम्पर्कमा आएका ३४९ जनालाई प्रदेश सरकारमार्फत राहत वितरण गरिसक्यौँ ।”
सबै समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गयो तर मौसम परिवर्तन भएन । पुर्खाहरू पैदल वा घोडामा व्यापार गर्थे, अहिलेको नाति पुस्ता मोटर वा हवाई यात्रा गरेर भारतसम्म पुगेर व्यापार गर्न थालेका छन् । सधैँ बेलैमा उनीहरू गाउँ फर्कन्थे । तर यसपालि नसोचेको भयो । नचाहँदा नचाहँदै उनीहरूले एक महिनाभन्दा बढी समय बेँसीमै बस्नुपरेको छ । “अझै कति दिन पोखरामै बस्नु पर्ने हो”, थासाङ गाउँपालिका–२ नाउरीकोटका ९१ वर्षीय भक्तिप्रसाद गौचन भन्नुहुन्छ, “यत्रो उमेर भो, यस्तो महामारी त कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन ।”
विषेशगरी उपल्लो मुस्ताङका स्थानीयवासी बक्खु लगाएर गर्मी ठाउँमा बस्न बाध्य छन् । “हिमाली जनता मर्कामा परेका छन्”, सासंद प्रेमप्रसाद तुलाचन भन्नुहुन्छ, “चिसो वातावरणमा बाक्लो कपडा लगाएर बस्नुपर्ने नागरिक हाल गर्मीमा बाक्लो कपडामा कसरी बसेका होलान् !”
हिमाली भेगमा फागुन महिनादेखि खेतीको समय शुरु हुन्छ । वर्षमा एक बाली मात्र लगाइन्छ, त्यो बाली असोजमा भित्र्याइन्छ । तत्काल बाली लगाउन नपाए खेती बाँझो रहने सम्भावना हुन्छ । “पोखरातिर अलपत्र परेका नागरिकलाई गृह जिल्लामा फर्काउने पहल गरेका हौँ”, सासंद तुलाचनले भन्नुभयो, “माथि पहिल्यैदेखि बसिरहेकाहरू बाहिरबाट गाउँले आउँदा कोरोनाको सङ्क्रमण हुने डरले त्रसित भएकाले समस्या भएको छ ।”
लकडाउनले पुस्तौँपुस्ताको व्यापार र स्थानीयवासीको दिनचर्या नै परिवर्तन गरिदियो । त्यसैले परापूर्वकालदेखि चलेको भनाइ ‘काफल पाक्यो, भोटे फक्र्यो’ यसपालिका लागि ‘काफल पाक्यो तर भोटे फर्केन’ भनेझैं भयो । तैपनि गाउँलेको आशा मरेको छैन । “हाम्रो ठूलो चुनौती भनेकै गर्मी हो”, छिरिङले आग्रहको भाकामा भन्नुभयो, “हाम्रो व्यथा बुझेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई गाउँ जान दिए हुन्थ्यो ।”
––– ठिनी, ७ वैशाख (रासस) :
Previous articleअब गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गर्न नपाइने
Next articleकोरोनाले अप्ठ्यारोमा हाम्रो कृषिमा अब के गर्ने ?